Sargaal ka tirsan Al-shabaab ayaa gacanta lagu soo dhigay – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida Iyo Sirdoonka Qaranka Somaliyed (NISA) ayaa gacanta ku soo dhigay Sarkaal ka tirsan Ururka Al Shabaab oo Saraakiisha ay ku sheegeen inuu ahaa Horjooge Shabaab ka tirsan.
Sarkaalkaan ayaa laga soo qabtay Deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho, kadib macluumaad laga helay saddex nin oo ciidamada NISA shalay galab gacanta ku soo dhigeen iyaga iyo hub ay wateen.
Afhayeenka Wasaarada Amniga gudaha ayaa sheegay xogta laga helay saddexda nin in lagu soo qabtay Sarkaalka oo ahaa ninkii soo qaban qaabiyay weerar la doonaayay inay fuliyaan saddexda ruux ee ciidamada ay qabteen.
C/kaamil Macalin Shugri Afhayeenka Wasaarada Amniga ayaa tilmaamay in Sarkaalka laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaallo Deegaanka Ceelasha biyaha.
Waxa kale uu sheegay ciidamada NISA inay soo qabteen labo ruux oo Shabaab ka tirsan kuwaasi oo dilal qorsheysan ka geysan jiray Magaalada Muqdisho.
“Meesha howlgalka laga sameeyay ee laga soo qabtay horjoogahan waa deegaanka Ceelasha biyaha tirada guud ee waa Afar nin markii hore saddex nin ayaa la soo qabtay, kadib ayaa Sarkaalkaan la soo qabtay oo Ceelasha biyaha laga soo qabtay,labo nin oo Bistooladleey aheyd ayaa iyagana la soo qabtay, labadaasi nin oo xogtooda la helay inta aysan la bixin Bistooladaha ayaa ciidamada ay soo qabteen, wax dhib ah ma geysan iyagana looma geysan Degmada Dharkiinley ayaa laga soo qabtay.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga.
Qaraxyada ciidamada ay fashiliyeen ayaa ku soo aadeysa, iyadoo maalmo kooban ay inaga xigaan Bisha Barakeysan ee Ramadaan oo Shabaabka dilal qorsheysan ay ka geystaan Magaalada Muqdisho.